सपना राेक्का मगरको त्यो 'फेक सम्बन्ध' | नेपालन्युज
हिजोआज त्यो बाबु छोरीको सम्बन्ध रहेको जोडीले चर्चा कमाएको छ, बाबुको भूमिकामा रहेका विनयजंग बस्नेत र छोरीको भूमिकामा रहेकी सपना रोक्का मगर । त्यो फेक सम्बन्धनै आजको परिणाम बन्न पुग्यो ।
आमपाठक र दर्शकले यि दुई जोडिको कामको प्रसंसा गरे । यति मात्र होइन कि, सपना रोक्का मगरलाई व्रिटिस बोर्ड कासि्टङ (बिबिसी) ले सन् २०२० को एक सय प्रभावशाली महिलाको सूचिमा छनौट गर्यो । त्यस पछि बाबुछोरी सम्बन्धमा पनि खलल् पुग्दै गएको पाइन्छ । नावालिका देखिनै जीवनलाई लथालिंग रुपमा गुजार्दे आएका सपना पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरे पछि नक्कली बाबु बनेका विनयजंग वस्नेतसँग भेट हुन पुग्यो । त्यस पछि सपनाले फेरी एउटा थप जीवन विताउन शुरु गरिन् । उमेरले बाबुछोरी जस्तै भए पनि जीवन विताउने शैली भने उस्तैउस्तै रह्यो । उनीहरु विच लामो समय एउटै काममा सहकार्य भयो र बसाई समेतसँगै रह्यो ।
विनयजंग बस्नेतले छोरीको सम्बोधनमा सपनालाई सार्वजनिक गरे र केही युटुव सञ्चालकहरुले समेत पत्याएर बाबुछोरीको काम प्रति प्रसंसा गर्दै आएको थियो । किनकी यि बाबुछोरीले वेवारिसे शव संकलन गरी पशुपति आर्यघाटमा जलाउने एक उदाहारणीय काम गरेका थिए । कामको प्रसंसा हुने गरेको थियो तर त्यो जोडीमा लुकेको फेक सम्बन्धका बारेमा भने कसैले पनि चासो राखेका थिएनन् ।
पछिल्लो समय विविसीले सपनालाई चर्चामा ल्याएसँगै उनी दुई विचको सम्बन्ध तोडियो र सपनाले विनयजंग वस्नेतलाई किर्नाले चौपाय छाडेझै गरी छाडीदियो । त्यस पछि विनयजंगले सपनाको नाङगो तसि्वर सार्वजनिक गर्ने धम्की दिए । के एउटा बाबुले छोरीको नाङगो तसि्वर सार्वजनिक गर्न सक्छ ? यो प्रश्न हिजोआज चर्चाको विषय बनेको छ । तर उनी दुवै जना लामो समय एकै ठाउँमा बस्दै आएको पाइन्छ ।
विनयजंग र सपना जस्ता बाबुछोरीको फेक सम्बन्धले समाजमा कस्तो सन्देश पुर्याउला त्यो पनि सबैले सोच्नु पर्ने समय आएको छ । विनयजंगलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरी सकेको छ, सायद कारवाही हुने विस्वासमा छौ । तर सपनाले विनयजंगले देखाएको बाटो र हिम्मतकै कारण त्यो नाम र प्रतिष्ठा कमाएको भन्ने विर्षनु सबै भन्दा ठुलो भूल हो । किनकी त्यो फेक बाबु थियो र फेक सम्बन्ध थियो ।
युटुवरहरुसँग जथाभावि बोलेर चर्चामा आएका विनयजंगले वेवारिसे सव व्यवस्थापनले निकै चर्चा कमायो र अझै पनि त्यो कामलाई विनयले निरन्तरता दिनु राम्रो हो । पत्रकारिताको धर्म नराखी युटुवरवालाले पैसा कमाउने लक्षले जथाभावि उनको भिडियो कैद गरी सार्वजनिक गर्नुनै गलत थियो । आवेगमा आएर बोलिएका बोलीलाई मुल विषय बनाउनुले गर्दा आज विनयजंग प्रहरी फन्दामा पुगेको सत्य हो । अव विनयलाई उकास्ने जिम्मा लिन सक्ला त युटुवर सञ्चालकहरुले ?
जीवन देखि हारिसकेका सपना रोक्का मगर जस्ता अन्य महिलाहरुलाई समेत विनयजंगले नयाँ जीवन दिन उत्प्रेरित गर्नु पर्दछ तर फेक सम्बन्ध राखेर होइन वास्तविक सम्बन्ध राखेर ? अरु जे भए पनि विनयको काम प्रति भने सम्मान र सलाम् ।
भागरथी प्रकरणः दिनेश भट्टमाथि अनुसन्धानका लागि ५ दिन म्याद थप
प्रभास अभिनित राधे श्यामको यो दृश्यको लागत साढे दुई करोड
दिनेशले हत्या स्विकारे, बलात्कार स्विकारेनन